Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်)
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Hello Sayarwon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Generic Name: Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
IFOSFAMIDE သည်ကင်ဆာရောဂါကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်စေသည့်အတွက် ကင်ဆာရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ အများအားဖြင့် အခြားသော ဆေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါသည်များတွင် ပေးလေ့ရှိပါသည်။
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
IFOSFAMIDEကို အများအားဖြင့် ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ထိုးဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆေးအရည်သည် အရောင်နောက်နေခြင်း၊အရောင်ပြောင်းနေခြင်း၊ ဆေးဗူးများကွဲကြေပျက်စီးနေခြင်းများရှိလျှင် ဆေးကို မသုံးပါနှင့်။ ထို့ပြင် ထိုးဆေးကို မှီဝဲနေစဉ်တွင် ရေများများသောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်အရေပြားကို ဆေးနှင့် ထိမိလျှင် ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးရပါမည်။ အကယ်၍ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ နှင့် နှာခေါင်းပေါက်များနှင့် ထိမိပါက သေချာစွာ ပလုတ်ကျင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးထိုးသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဗူးများကို ကလေးသူငယ်များနှင့် ဝေးသော နေရာတွင်ထားပါ။ ဆေးထိုးအပ်များကို တခါသုံးများအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုသော ဆေးထိုးအပ်များနှင့် ချွန်ထက်သော အရာများကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။
မသိလျှင် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
(ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ IFOSFAMIDEကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
IFOSFAMIDEဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
IFOSFAMIDEကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
IFOSFAMIDEကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်သည်။
Ifosfamide သည် မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့် ယင်းကို အရက်သို့မဟုတ်အခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် တွဲမသုံးသင့်ပါ။ ထိုဆေးကို သတိနှင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအသုံးပြုနေလျှင် ကားမောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်လျှင် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ဆီးမအောင့်ထားဘဲ မှန်မှန်သွားပါ။ ထိုဆေးထိုးနေစဉ် အနည်းဆုံး တစ်ညလျှင် တစ်ကြိမ်း ဆီးထသွားရနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်က ပြောထားပါလိမ့်မည်။
Ifosfamide သည် သွေးမွှားဥ အရေအတွက် ကို လျော့ကျစေသည့်အတွက် သင့်ကို အနာတရဖြစ်လွယ်စေခြင်း၊ သွေးခြေဥစေခြင်းများဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေရင်း သွေးခြေဥခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်အားပြောပါ။
Ifosfamide သည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အနာကျက်နှုန်းကို နှေးစေသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင် နေထိုင်ပါ။
Ifosfamide သည် သင့်ကိုယ်ခန္ဓါတွင် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေးသောက်ထားလျှင် အအေးမိနေသူများ၊ ရောဂါဖြစ်နေသူများနှင့် ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ သင့်တွင် ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
Ifosfamide သည် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန် အားမေးမြန်းပါ။
Ifosfamide သောက်နေစဉ် ကာကွယ်ဆေးများထိုးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။ သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းပါ။
Ifosfamide သောက်နေစဉ် အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နှင့်သွေးစစ်ခြင်း စသည့် လိုအပ်သော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်မှသာ ဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်က ချိန်ဆနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးခန်းကို ရက်ချိန်းမှန်မှန်ပြပြီး လိုအပ်သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကို ခံယူပါ။
ကလေးများတွင် Ifosfamide ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှင့် စိတ်ချရမှုရှိမရှိ တိကျသော စမ်းသပ်မှုများမရှိသည့်အတွက် သတိနှင့် သောက်သုံးရန်လိုပါသည်။
ထို့ပြင် အောက်ပါတို့ရှိလျှင် Ifosfamide ကို လုံးဝမသုံးပါနှင့်။
Ifosfamide တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
ပြင်းထန်သော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ အလုပ်မလုပ်သည့် ရောဂါရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ပထမ ၃ ပတ်တွင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးအားလုံးတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်း လူအားလုံးသည် ထိုဆိုးကျိုးများကို ခံစားရချင်မှ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ
အန်ခြင်း တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ကြာရှည်စွာ ခံစားနေရပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း(အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)
ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးမဲမဲသွားခြင်း
ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း
ဆီးသွားလျှင် နာခြင်း၊ ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း
နှုတ်ခမ်းများနှင့် ပါးစပ်တွင် အနာများဖြစ်ခြင်း
ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး မောပန်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
အရေပြားနှင့် မျက်လုံးများဝါခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် –ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ifosfamideဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ifosfamide က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ifosfamide ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
ကျောက်ကပ်၊ အသည်း ရောဂါ
ဘက်တီးရီးယား၊ မှိုရောဂါ နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောဂါများရှိလျှင် (ဥပမာ- ရေကျောက်ပေါက်ခြင်း၊ ခါးပတ်ရေယုန်ဖြစ်ခြင်း)
ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် ကုသမှုများ ခံယူနေလျှင်သင့်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
(Ifosfamide ကို အဆင့် ၃ ကပ်ပယ်အိတ်ကင်ဆာများတွင် အခြားသော ကင်ဆာဆေးများနှင့် တွဲပေးပါသည်။)
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ Ifosfamide ကို သွေးဆိပ်တက်ပြီး ၃-၄ ပတ်အကြာတွင် စပေးပြီး ပထမရက်နှင့် ၅ရက်မြောက်နေ့တွင် အကြောထိုးဆေး 1.2 g/m²/day ကို မိနစ် ၃၀ ကြာအောင် သွင်းပါ။ (သွေးဆိပ်တက်ခြင်းဆိုသည်မှာ သွေးမွှားဥအရေအတွက်>100,000 cells/mm³ ဖြစ်သွားခြင်းနှင့် သွေးဖြူဥအရေအတွက် ≥4,000 cells/mm³ ဖြစ်သွားခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။)
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ပထမရက်နှင့် ၃ရက်မြောက်နေ့တွငအကြောထိုးဆေး2g/m²/day ကို မိနစ် ၃၀ ကြာအောင် သွင်းပါ။(အများဆုံးသွင်းနိုင်သော ပမာဏမှာ6 g/m² ဖြစ်သည်။)
အခြားသော ကင်ဆာဆေးများနှင့် တွဲပြိး အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏမှာ ၂၄နာရီအကြောသွင်းဆေး5g/m² ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Ifosfamide ကိုသင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ifosfamide (အိုင်ဖို့စ်ဖမိုဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Ifosfamide ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ifex ထိုးဆေးအရည် 1g
Ifex ထိုးဆေးအရည် 3g
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာအရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Ifosfamide ကိုထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက)သင့်ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီး ဆေးအညွှန်းကို မေးမြန်းပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 13, 2017
Ifosfamide solution. https://www.drugs.com/cdi/ifosfamide-solution.html. Accessed November 30, 2016
Ifosfamide (Rx). http://reference.medscape.com/drug/ifex-ifosfamide-342109#0. Accessed November 30, 2016.
နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ မှဲ့မဟုတ်တဲ့ အမဲစက်လေးတွေ ပေါ်လာတာ ဘာကြောင့်လဲ ။ ။
ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုယ်သိထားတွေက မှန်နေလား၊ မှားနေလား ။ ။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ